Fanavaozana Philips Hue amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo switch dimmer sy sensor sensor | Vaovao IPhone
Karim Hmeidan | | Fitaovana IPhone, About us
Hitantsika tsikelikely ny fandefasan'ny mpamorona sy ny mpanamboatra vokatra vaovao mifanaraka amin'ny HomeKit Apple, kit fampandrosoana mba hifehezana ireo fitaovana marani-tsaina avy amin'ny iDevices, automatisation an'ny Apple Apple mba hifankahazoantsika. SASANY kojakoja maranitra izay miha-miadana tsikelikely sy kojakoja izay miha-maranitra ary misy fampiasa vaovao.
Ary iray amin'ireo kojakoja mifandraika amin'ny HomeKit ireo dia kojakoja Philips Hue, tsy isalasalana fa ny tena mahaliana. Ny kojakoja Hue sasany dia ahitantsika takamoa isan-karazany, switch, kojakoja tsy manam-petra mifandraika amin'ny jiro marani-tsaina. Hue vitsivitsy izay nohavaozina tamin'ny fampidirana asa vaovao ho an'ny fifehezany amin'ny alàlan'ny fampiharana Apple Home. Aorian'ny fitsambikinana dia omenay anao ny antsipiriany rehetra momba an'io fanavaozana vaovao ny kojakoja maranitra mifanaraka amin'ny HomeKit avy amin'ny Apple, Philips Hue.
Fanavaozana tena mahaliana satria ankoatry ny fanatsarana ny fiasa ankapobeny ny kojakoja Philips Hue, izao koa Azontsika atao ny mifehy ny seho an'ny app Apple Home miaraka amin'ny switch Dimmer (switch izay ahafahantsika miovaova ny hamafin'ny takamoa), ankoatry ny fahafahantsika mampiasa ny mihetsika sensor amin'ny fitaovantsika hampiasa ireo kojakoja Hue.
Ity no lazain'izy ireo amintsika ao amin'ny log fanavaozana an'ny fanavaozana vaovao ny fampiharana Hue ho an'ny iOS, ilay vaovao 2.16.0 version:
Ny fifanarahan'ny HomeKit miaraka amin'ireo kojakoja Philips Hue dia mihalehibe kokoa. Hue mikasika, Dimmer Switches ary sensor Hue mihetsika. Zavatra iray ahafahantsika mampihetsika ny seho ankafizinay indrindra avy amin'ny app Apple Home miaraka amin'ny kitikitika bokotra iray, na koa ny fihetsiky ny vatantsika. Raha te-hampiorina ireo automatique ireo dia mila Apple TV andiany faha-4 amin'ny tvOS 10, na iPad amin'ny iOS 10 na taty aoriana.
configures fihetsiky ny antoko fahatelo. Ho hitantsika izao ny fizarana vaovao antsoina hoe «Avy amin'ny rindranasa hafa» nampiana «Routine». Eto isika dia afaka mampihetsika, manafoana, na mamafa ireo fomba mahazatra noforonina niaraka tamin'ny rindranasa hafa.
Fanatsarana ny fanavaozana rindrambaiko. Fizarana vaovao antsoina hoe "Fanavaozana mandeha ho azy" no nampiana ho an'ireo toe-javatra fanavaozana ny lozisialy. Ankehitriny isika dia afaka mamelona sy mamaritra ny ora hanatanterahana fanavaozana mandeha ho azy ary hanamarina raha manana ny kinova farany indrindra ny Hue.
Avereno amin'ny toerany ny Hue anao. Raha nanamboatra Hue miaraka amina rindrambaiko antoko fahatelo ianao ary hitanao fa tsy mandeha tsara izany dia azonao atao ny mamerina ny Hue anao amin'ny sehatry ny ozinina amin'ny alàlan'ny fitadiavana an'ity mety ity ao amin'ny menio amin'ny antsipiriany momba ny fitaovana Hue.
Ny fanovana famolavolana kely dia natao tamin'ny kisary sy ny interface interface.
Araka ny fantatrao, ny fampiharana Philips Hue dia fampiharana afaka tanteraka sy manerantany, mba hahafahanao mampiasa azy io amin'ny iDevices misy anao, azonao atao aza fehezo ny fitaovanao Hue avy amin'ny fampiharana Apple Watch. Fampiharana handefasana ny Hue anao ary mifanaraka tanteraka amin'ny app Apple Home ary koa ny HomeKit. Raha manana fitaovana Hue ianao dia aza misalasala mametraka ity fanavaozana ity ho an'ny iDevices.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Fanavaozana Philips Hue amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo switch dimmer sy sensor sensor
Raha miresaka momba ny charger Qi ho an'ny iPhones vaovao i Aukey dia manana Wireless 3-coil